Wararkii: Nov 5, 2007
C/llaahi Yuusuf oo Ra’isul Wasaare la doonayo mid ka mid ah Wasiirada Xukuumaddii Cali Max’ed Geedi
Ciidamada Itoobiya oo bilaabay in ay si hoose u gumaadaan shacabka
Qaraxyo lala beegsaday ciidamo itoobiyaan ah
Ciidamo Ereteriyaan ah oo buux dhaafiyey xuduuda u dhexeysa Itoobiya iyo Ereteriya.
Wafdi ka socda Dowladda Mareykanka oo ku soo fool leh Baydhabo
Maamulka Gobalka Banaadir oo mamnuucay banaanbaxyada aysan ogeyn Maxkamadda gobalka
Iyadoo looga fadhiyo madaxweynaha DFKMG C/llaahi Yuusuf Axmed in uu soo magacaabo ra’isul wasaarihii bedeli lahaa ra’isul wasaarihii hore ee Cali Max’ed Geedi, ayaa haatan waxa uu wadaa kulamo la tashiyo ah oo la xiriira cida loo magacaabayo ra’isu wasaare, wararka ka imaanaya Magaalada Baydhabo waxay sheegayaan in ra’isul wasaare uu la rabo Wasiirkii arrimaha gudaha ee dowladii Cali Max’ed Geedi Maxamed Sheekh Maxamuud (Gacma Dheere).
Qaar ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa noo xaqiijiyey in Madaxweynaha DFKMG C/llaahi Yuusuf uu maalmahan kulamo gaar ah la lahaa Gacma Dheere oo la xiriira sidii loogu magacaabi lahaa Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya. Qaar ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa la sheegay in ay Gacma Dheere la doonayaan in uu noqdo Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya, kuwaas oo doonaya in ay ka qalqaalsadaan in uu xil ka siiyo Golaha Wasiirada, warar kale ayaa waxay sheegayaan in Guddoomiyihii Guddiga dib u heshiisiinta uu dadaal ugu jiro sidii uu u noqon lahaa Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya, isagoo dhawaan gaaray Magaalada Baydhabo.
Cali Mahdi ayaa maanta la filayaa in uu qudbad ka jeediyo Baarlamaanka Soomaaliya, taas oo la xiriirta go’aanadii ka soo baxay shirkii dib u heshiisiinta Beelaha Soomaaliyeed ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada Baarlamaanka waxaa la sheegay in ay Cali Mahdi ku eedeeyeen in uu wax is daba mariyey intii uu socday shirkii dib u heshiisinta Soomaaliyeed, gaar ahaan dhaqaalihii loogu talagalay, hase yeeshee Cali Mahdi ayaa ku tilmaamay wararkaasi kuwo kutirikuteen ah. Dowladaha Mareykaka iyo Itoobiya ayaa la sheegayaa in ay iyana wataan Ra’isul Wasaare bedela ra’isul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Max’ed Geedi, iyadoo lagu waramay in siyaasiyiin ka tirsan Dowladda Mareykanka ay ku sugan yihiin Magaalada Adis-Ababa kuwaas oo Dowladda Itoobiya kala tashanaya cidda loo magacaabayo Ra’isul Wasaare.
Bulshada Soomaaliyeed ayaa dhegaha u taagaya waxa ka soo yeeri doona Magaalada Baydhabo taas oo ku saabsan cidda loo magacaabayo Ra’isul Wasaaraha Soomaalya.
Ciidamada Itoobiya oo dhawaan dagaal culus la galay kooxaha ka soo horjeeda joogitaankooda ayaa haatan waxay bilaabeen in ay si hoose u gumaadaan bulshada Soomaali-yeed, kadib markii labadii maalmood ee la soo dhaafay labo xarumood oo ay ku sugan yihiin ciidamada itobiya hortood lagu arkay maydadka dad ay dileen.
Maalintii doraad ahayd ayaa saddex qof oo uu ku jiray mid ka mid ah shaqaalaha Horn Afrik oo ay ciidamada Itoobiya qabteen ayaa la sheegay in la soo dhigay xarunta Warshaddii Ifka Xalan, iyadoo taas ay si aad ah uga walwaleen ayaa haddana shalay subax ciidamada Itoobiya eek u sugan Maslax waxay labo qof maydkooda soo dhigeen meel aan sidaasi uga fogeyn xeradooda, waxaana la sheegay in dadkaasi ahaayeen kuwo safar ah oo ka yimid Magaalada Jowhar.
Arrintaani ayaa waxaa si weyn walaac uga muujiyey Hay’adaha Xaquuqda Aadanaha iyo dhamaan shacabka ku nool Magaalada Muqdisho kuna tilmaamay mid ka baxsan Bini’aadannimada, sidoo kale waxaa cambaareeyey odoyaasha beelaha Hawiye oo sheegay in ani keeni karto kacdoon sii baaha.
Ciidamad Itoobiya oo aan maalmahan ka soo bixin xeryahooda ayay dadku u dheg taagayaan waxa dhici doona, maalmaha soo socda, iyadoo da badani ay ka qaxeen guryahooda, sidoo kale ciidamo Itoobiyaan ah oo aad u fara badan ayaa ku soo qulqulaya magaalada Muqdisho.
Iyadoo magaalada Muqdisho ku soo qulqulayaan ciidamo Itoobiya ah, ayaa haddana wararka ka imaanaya gobalka Gedo waxay sheegayaan in ciidamo Itoobiyaan ah oo gobalkaasi ka soo gudbayey kuna soo jeeday Muqdisho ay miino kula qaraxday Degmada Luuq, waxaana la sheegay in ay khasaaro soo gaartay, waxayn markiiba bilaabeen baaritaan iyagoo qabqabtay dhowr qofood.
Dhanka kale habeen hore ayaa hotel ku yaala Magaalada Doolow Itoobiya ayaa waxaa ka dhacay qarax weyn waxaana ku dhintay dhowr qofood oo ay ku jiraan askar ka tirsan ciidamada Itoobiya, waxaana la sheegay in qaraxaasi ay ciidamada Itoobiya u qabqabteen dhowr qofood, sidoo kale Gawaari kolonyo ahayd oo Itoobiyaan ah oo marayey agagaarka Belidoogle ayay miino ku qaraxday, iyadoo la sheegayo in halkaasi khasaaro ka gaartay.
Wararka ka imaanaya dalka xuduuda u dhexeysa Itoobiya iyo Ereteriya ayaa sheegaya in xuduuda ay soo buux dhaafiyeen ciidamo ka tirsan dalka Ereteriya, gaar ahaan halka ay isku hor fadhiyaan ciidamada Itoobiya iyo kuwa ereteriya.
Dowladda Ereteriya ayaa walaac ka muujisay arrintaani, waxayna ku soo beegan tahay xili ciidamo aad u fara badan oo Itoobiyaan ah ku sugan yihiin Dalka Soomaaliya, kuwaas oo asbuucyadii la soo dhaafay Muqdisho kala kulmay iska caabin xoog leh.
Dowladda Ereteriya ayaa waxay waddaa qorshe ay dooneyso in ay kaga faa’iideysato iska hor imaadyada ciidamada Itoobiya ku haysta Soomaaliya, waxaana la sheegay in mas’uul ka tirsan Dowladda Itoobiya uu ka cosado beesha in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada Itoobiyaka wadaan xuduuda u dhexeysa Ereteriya iyo Itoobiya.
Waxaa si aad ah loo adkeeyey amaanka Magaalada Baydhabo, iyadoo la filayo in saacadaha soo socda Magaalada Baydhabo uu soo gaaro wafdi ka socda Dowladda Mareykanka, kaas oo la filayo in uu kulamo la yeelan doono Madaxweynaha DFKMG C/llaahi Yuusuf iyo Xildhibaanada Baarlamaanka.
Sababaha ugu weyn ee wafdigaani u imaanayo ayaa lagu sheegay in wafdigaani uu Madaxweynaha DFKMG c/llaahi Yuusuf kala tashan doonaan cidda loo magacaabayo ra’isul wasaaraha Soomaaliya, maadaama dowladda Mareykanku ahayd dowladdii ka dambeysay iscasilaada ra’isul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Max’ed Geedi.
Dowladda Mareykanka ayaa la sheegay in ay wadato shaqsi wata dhalashada Mareykanka oo mudo ku suganaa wadakaasi, taas oo ay dooneyso in ay ka dhaadhiciso Madaxweynaha DFKMG C/llaahi Yuusuf, inkastoo Cali Yuusuf la sheegayo in uu isna wato rag ay si aad ah isugu dhow yihiin oo ay mudo isla soo shaqeynayeen.
Xildhibaan diiday magaciisa ayaa sheegay “Shariif Xasan ayaa laga qaaday xilkii, guddoomiyihii maxkamadda sare ayaa la xiray, Cali Max’ed Geedi ayaa lagu qasbay in uu iscasilo, wareegtaduna waxay ku imaan doontaa C/llaahi Yuusuf”, waxa uuna sheegay xildhibaankaasi in Dowladda Federaalka
Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed oo waxba kama jiraan ku tilmaamay in ay u xiran wadooyinka qaar
Mas’uuliyiin kla tirsan Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed ayaa sheegay in aysan u xirneen qaar ka mid ah wadooyinka Magaalada Muqdisho, waxayna sheegeen in maalmihii ugu dambeeyey aysan ciidanka Booliisku wax hawlgal ah sameyn, sidoo kale mas’uuliyiintu waxay sheegeen in ciidamada Itoobiya aysan ku soo wargelin hawlgalkii ay sameeyeen maalintii jimcaha ahayd, iyagoo sheegay in taasi ay gaar u ahayd.
Mas’uuliyiinta Booliiska waxay sheegeen in ay baaritaano ku sameyn doonaan tacadiyo iyo gabood falo ay sameeyeen ciidamada Itoobiya ee ku sugan xerada Maslax iyo Garoonka Cayaaraha ee Muqdisho, iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ciidamada Itoobiya ay bilaabeen in ay dadka qabqabtaan isla markaana dilaan, iyagoo banaanka soo dhiga maydkooda, waxaana ugu dambeeyey saddex qof oo ay soo dhigeen jidka warshadaha iyo labo qof oo ay shalay soo dhigeen agagaarka xerada Maslax.
Mas’uuliyiinta Booliiska waxay sheegeen in ay bilaabi doonaan sababaha keenay in ay xirmaan wadooyinka la sheegay in ay xiran yihiin.
Labo wado oo u muhiim u ahaa Bulshada Soomaaliyeed ayaa xiran, waa midda taranbuunka, halka midda kale ay ahay mid dhex marta jidka wadnaha oo iyana tagta Kiilomiti Foor, qofkii ku sugan Lambar Afar ee doonaya in uu tago balaac sii iyo Baar ubax, waxa uu marayaa Soobe, Banaadir, kadibna waxa uu ka soo Ex. Control Afgooye, kadibna waxa uu la soo wareegayaa jidka warshadaha, isagoo la soo leexanaya warshadda caanaha.
Iyadoo todobaadyadii la soo dhaafay banaanbaxyo looga soo horjeedo ciidamada Itoobiya ka dhacayeen, dadka banaanbaxyaasha ahi ku dhawaaqayeen ereyo ka dhan ciidamada Itoobiya ayaa maalintii shalay ahayd maamulka gobalka Banaadir waxa uu mamnuucay banaanbax aan ruqso looga haysan Maxkamadda gobalka.
“Ciddii sameysa banaabax aysan ruqso u haysan wixii ka yimaada iyaga ayaa mas’uul ka noqon doona”, sidoo kale Odoyaasha Beelaha Hawiye ayaa lagu wargeliyey in haddii ay qabanayaan banaax ay soo wargeliyaan maxkamadda.
Banaanbaxyada ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa inta badan waxay ku yimaadaan marka dadweynuhu ay arkaan falal ka dhan ah bini’aadannimda oo ay ku kacayaan ciidamada Dowladda iyo kuwa Itoobiya, waana banaanbaxyo aysan cidina soo abaabulin balse ka dhasha xaaladda markaasi.
Mid ka mid ah dadweynaha ayaa waxa uu sheegay in aysan marnaba qaadan doonin wareegtaasi ka soo baxday maamulka Gobalka Banaadir, isagoo sheegay in ay sii wadan doonaan banaanbaxyada looga soo horjeedo ciidamad Itoobiya.